လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်ကစပြီး Web Development ကို ထဲထဲဝင်ဝင် ပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်။ Code မရေးတာလည်း ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့အပြင် Code ရေးတုန်းကတည်းကလည်း Windows ကို မသုံးခဲ့ဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်ကစပြီး Web Development ကို ထဲထဲဝင်ဝင် ပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်။ Code မရေးတာလည်း ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့အပြင် Code ရေးတုန်းကတည်းကလည်း Windows ကို မသုံးခဲ့ဘူး။ ခုတော့ ရုံးမှာက Windows သုံးမှ ရမယ့်အခြေအနေတွေ ရှိနေတော့ Windows မှာပဲ Development လုပ်မယ်ပေါ့။
ဒါနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း Development Environment တစ်ခု တည်ဆောက်ရပါတယ်။ xampp တို့၊ putty တို့ Gulp တို့ Bower တို့ စသည်ဖြင့် ခေတ်ဟောင်းတွေ စပြီး သွင်းတာပေါ့။ ကိုယ်က အဲ့ခေတ်ကကိုး။ PHP developer ဆိုတော့ မရှိမဖြစ် composer ကိုလည်း သွင်းရတယ်။ Version control အတွက် ကတော့ Git နဲ့ တချို့ အခက်အခဲလေးတွေ ပြေလည်စေဖို့ Source Tree ကို install လုပ်တယ်။ စသည် စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။
Code ပြန်ရေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်တွေရဲ့ လက်စွဲ Legendary Code Editor ဖြစ်တဲ့ Sublime ကို စသွင်းဖြစ်တယ်။ အခုထိလည်း Best Editor ဖြစ်နေဆဲပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ပစ္စည်းပစ္စယတွေ သုံးရင် Set လိုက်သုံးရတာကို သဘောကျတဲ့ ဝသီကြောင့် Microsoft က Free and Opensource ပေးလိုက်တဲ့ Visual Studio Code ကို စမ်းသုံးကြည့်မယ်ဆိုပြီး သွင်းလိုက်တယ်။
အရင် Java ရေးတုန်းက Netbeans IDE တို့ Eclipse တို့ကို သုံးခဲ့ဖူးတယ်။ Android Studio (ရှေးရှေးတုန်းက) တို့ Xcode တို့ သုံးခဲ့ဖူးတယ်။ PHPstorm (ရှေးရှေးတုန်းက) လည်း ဝယ်သုံးခဲ့ဖူးတယ်။ ခေါင်းထဲမှာ စွဲနေတာက IDE level editor ဆိုရင် အင်မတန် လေးကန်၊ ဆိုဒ်ကြီးပြီး ရုပ်ဆိုးတယ်ပေါ့။ PHPstorm သုံးတုန်းကဆိုရင် i7, 16GB နဲ့ SSD ကို မနိုင်ချင်သလိုလို ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါကြောင့် IDE ဆိုရင် မကြိုက်ဘူး။ Java ရေးတုန်းကလည်း Notepad++ ပဲ သုံးခဲ့တယ်။ PHP ဆိုလည်း PHPstorm တစ်နှစ်စာပဲဝယ်ပြီး ထပ်မဝယ်တော့ဘူး။ Codelobster ဆိုလည်း မကြိုက်ခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် Developer ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက် Notepad++ နဲ့ Sublime နဲ့သာ နှစ်ပါးသွားခဲ့တယ်။
Visual Studio Code ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ IDEfobia ကို ဖျက်ပစ်လိုက်နိုင်လောက်အောင် မိုက်တယ် ပြောရမယ်။ စဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Sublime ကိုဖွင့်သလောက် မြန်မြန်တက်လာတာတွေ့ရတော့ "ဟ! တယ်မြန်ပါလား" ဆိုပြီး သဘောကျသွားတယ်။ ပြီးတော့ UI / UX, မျှော်လင့်ထားသလို အရမ်းမုန်းခဲ့ဖူးတဲ့ UI မျိုး မတွေ့ရ‌ဘူး။ ကုဒ်ရေးရတာလည်း IDE level ဖြစ်ပေမယ့် Code Editor သုံးရသလောက်ကို သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်လွန်း‌တယ်။ သုံးရတာ လွယ်သလောက် Language အလိုက် Powerfully ဖြစ်တဲ့ Extension တွေကလည်း တော်တော်လေး စုံတယ်။ Cross Platform ဖြစ်တဲ့အတွက် Windows, Mac အပြင် Linux ကိုမှ Redhead based ဖြစ်ဖြစ် Dabient Based. ဖြစ်ဖြစ် အကုန်လုံးကို Support လုပ်တယ်။
ပြောချင်တာကတော့ VScode ကို ကြိုက်မိသွားတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ။ VScode က တခြား Editor တွေ၊ IDE တွေထက် ဘာတွေ ဘယ်လို ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကို Technically Compare လုပ်ထားတဲ့ Blog တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ VSCode က Sublime Text ကို သစ္စာဖောက်ရလောက်အောင် ကောင်းလွန်းတယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။